August 2018 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 20-12-1439
cusmaan	 Aug 31, 2018 0
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka wuxuu kamid yahay barnamijyada todobaadla ah ee ka baxa Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana looga faalloodaa arimaha Caalamka Islaamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida…
guuleed	 Aug 31, 2018 1
Barnaamijka diirada jimcaha ee todobaadlaha ah ayaa waxaa maanta looga hadlay isbadalada ka socda Dalka Itoobiya iyadoo la is dul istaagay dhulka Soomaali galbeed ee ku jira gacanta Itoobiya. waxaa ka qeybgalay: Aqoonyaha Suldaan…
halkaan ka dhegeyso warka subaxnimo.
guuleed	 Aug 31, 2018 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka subaxnimo ee Radio alfurqaan oo qodobo kala duwan lagu soo qaaay. Halkaan ka dhegeyso war subax 31 08 2018.
Ciidamada Al-Shabaab Oo Dagaal culus ku galay degmada Afgooye.
Habeenkii xalay, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal culus oo ballaaran waxay ku qaadeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose, halkaas oo ay ku suganyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa Shisheeyaha. Dadka…
guuleed	 Aug 30, 2018 0
Qeybta hoose waxaad ka dhagaysan kartaa barnaamijka dhuuxa oo caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 30 08 2018.
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo ee Radio alfurqaan oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war duhur 30 08 2018.
cusmaan	 Aug 30, 2018 1
Dhacdo la yaab leh ayaa laga soo sheegayaa dalka Afqaanistaan oo 17 sano oo xiriir ah uu ka socdo dagaal jihaad ah oo lagula jiro dowladda Maraykanka iyo xulafadeeda oo dalkaas duulaan ku qaaday. Kun askari, hogaankooda, islamarkaana…
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka subaxnimo ee Radio alfurqaan oo saaka lagu soo qaatay qodobo muhiim ah. Halkaan ka dhegeyso war subax 30 08 2018.
guuleed	 Aug 29, 2018 0
Qeybta hoose waxaad ka dhagaysan kartaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo ah barnaamij xiiso leh waxaana caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg dhuuxa wareysiyada 29 08 2018.
cusmaan	 Aug 29, 2018 0
Machad laga leeyahay dalka Maraykanka, islamarkaana sameeya diraasaad iyo baaritaanno la xiriira shacabka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in malaayiin ruux oo Ameericaan ah ay ku noolyihiin xaalad aad u liidata oo dhanka nolosha ah.…